‘अरे वाह ! मौन’-Nagarikaawaj.com
‘अरे वाह ! मौन’
शनिबार, अशोज १९, २०७०
बुटवल १९, असोज । दर्शकले राम्रा चलचित्र हेर्न नपाएका गुनासाहरुलाई पछिल्लो समय निकै वढेको पाईन्छ । सानो मुलुकमा, कम हलले थाम्न नसक्ने किसीमले हरेक हप्ताजसो दुई वा दुईभन्दा बढी चलचित्रहरु सुटिङ र रिलीज भैरहेका छन् । प्रत्येक चलचित्रको कथावस्तु र अभिनय एउटै वे मा हुने भएकाले हलले थाम्न नसक्ने किसीमले हिन्दी सिनेमा हेर्न ओईरिने दर्शकहरु नेपाली चलचित्रमा भने पातलिदै गएको पाईन्छ । प्रेम, सेक्स र फाइट पनि एउट–एउटै हुन्छन् ।
मौन जोडी अर्पण र नम्रता ।
तर, यही भीडमा शुक्रवारदेखी देशव्यापी रुपमा रिलीजमा आएको चलचित्र ‘मौन’ भने हेर्न लायक चलचित्र वनेको छ । यद्यपी ‘मौन’ को महत्व भने नहेरी थाहा हुदैन । नेपालमै पहिलोपटक एउटा म्युट जोडीको प्रेमप्रसंगलाई निकैनै सफलताका साथ पर्दामा उतारिएको छ । धेरैले हेर्नुभयो, हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोस् तपाईको लागी एउटा मनपर्ने चलचित्र छुट्ला । कथा काठमाडौ“वरिपरिकै हो, तर कथाले देश र विश्वसामुकै त्यस्तै म्युट जाडीको प्रतिनीधीत्व गरेको छ ।
सामान्य परिवारमा हुकिर्एको अमन (अपण) कथाको मुख्य पात्र सानोमा राम्रो गाउन सक्ने विद्यार्थी पछि बोल्न र सुन्न नसक्ने हुन्छ । त्यस्तै, कथाकी प्रमुख स्त्री पात्र वर्Èा (नम्रता) जन्मजात बोल्न र सुन्न नसक्ने हुन्छे । अमेरिकादेखि फकिर्एकी वर्Èाले आफूजस्तै बोल्न र सुन्न नसक्नेहरुलाई क्षमता अभिवद्धी गर्नका लागि कार्यशालाको आयोजना गर्छे । सोही कार्यशालामा वर्Èाको भेट एउटा एकलका“टे स्वभावको अमनस“ग हुन्छ । कसैस“ग बोल्न नरुचाउने अमन एकान्तमा चुरोट, गा“जाको सर्कोमा नै भुलिरहेको हुन्छ । घरका परिवारस“ग पनि त्यति नजिक नहुने स्वभावको अमनलाई चञ्चले स्वभावको वर्Èाले पहिलो भेटमा नै मनमा सजाउ“छे । चुरोटको सर्कोमा भुल्ने अमनलाई थर्काउछे, खाने चिज हैन, चुरोट । भेट भएको केही दिनमै वर्षाले निकैनै मायाँ गर्ने वानि पारेकी हुन्छे ।
अमनले यो कुरा पहिले त्यसै हावामा उडाएको हुन्छ । तर बिस्तारै ऊ पनि वरर्षाको प्रेममा समर्पित हुन पुग्छ । यिनीहरुविच प्रेम चलिरहेको हुन्छ । तर अमनलाई एउटा सपनाले झस्काइरहेको हुन्छ । त्यही सपनामा आउने मानिसलाई अमनले सपिङ मलको लिफ्टमा देख्छ । प्रेम चलिरहदा अमेरिकाबाट आएका वर्षाका बुबालाई थाहा हुन्छ वर्षा कसैको प्रेमको जालमा परेकी छ, वर्षाकी साथीले भनिदिएकी थिई । यो तिमीले गलत गरेकी छौ छोरी, तर वर्षाले मान्दिन । वुवाले भेट्न चाहेका हुन्छन् । अमन र वर्षाको बिहे गरेर दुवैलाई अमेरिका लाने चाह पनि हुन्छ । अर्कोतिर, अमन भने आफूलाई सपनामा झस्काइरहने पात्रको खोजीमा पिछा लाग्दै उसको घरसमेत पत्ता लगाउँछ ।
सोही क्रममा वर्Èाकी बहिनी अमनलाई घर लैजानका लागि उसको घरमा आउ“छे, तर अमन भने सपनामा आफूलाई तर्साउने व्यक्तीसँग बदला लिनका लागि आफ्नो गितार बेचेर किनेको पेस्तोल लिएर निस्किएको हुन्छ । वर्षा अमन आउने खुसीमा चिटीक्क परेर वस्दै हुन्छे । अमन त्यही सपनाको भुतलाई समाप्त पार्न हिडेको हुन्छ । संयोग त्यस्तै पर्छ, आखिर त्यो सपनाको भुत वर्षाकै वुवा रहेछन् । दुई गोली हानेपछि वर्षा आएर रुन्छे वुवालाई समाएर, अनि निकैनै ठुलो पस्चाताप मान्दै आफैलाई गोली हानेर अमन पनि मरिदिन्छ । दुवै मौन छन्, वोल्दैनन अनि सुन्दैनन ।
चलचित्रले यहि समयमा पनि निकैनै भावुक वनाईदिन्छ दर्शकलाई । चलचित्रको अन्त्यमा मात्रै थाहा हुन्छ कि आफ्नै प्रेमीकाको वुवाले सानो छँदा अमनलाई कानले नसुन्ने र नवोल्ने तरिकाले पिटेका रहेछन् । त्यही झोकमा अमनले वर्षाको वुवालाई मार्न पिछा गरेको हुन्छ । चलचित्र हेर्न दर्शकलाई अन्त्यमा पुगेपछि मात्रै चलचित्रको समिक्षा गर्न पुग्छन् । किनकी कथा अन्त्यमै राम्रोसँग वगेको छ । खास दिन खोजेको भाव पनि अन्त्यवाटै थाहा हुन पुग्छ । निकैनै सस्पेन्स खालको छ स्टोरी । चलचित्रमा डड्याङ डुडुङ र विभीन्न सवांदविनानै दर्शकलाई वुझाउदै चलचित्रको कथा त्यस्तै किसीमले अगाडी वढेको हुन्छ । न्यून संवादको प्रयोगले मौन कथा बोलिरहेको हुन्छ । सुरुमा झ्याउ मान्ने दर्शकलाई कथास“गै पात्रको पछिपछि दौडाउन सफल भएको छ, चलचित्र ‘मौन’ । अन्य चलचित्र भन्दा कम समयको सस्पेन्स कथा बोकेको ‘मौन’ ले चलचित्रमा दर्शकलाई उत्सकु र सस्पेन्समा राख्दै कथास“गै बा“धिएर राख्न पनि सफल छन् यसका निर्देशक सुरज भुषाल । चलचित्र हेर्ने दर्शकले सकारात्मक प्रतिक्रीया दिएका छन् । नागरिक आवाज डट कमका लागी वुटवलको कालीका चलचित्र मन्दिरमा रिपोर्टीङमा पुग्दा झण्डै दर्जन युवायुवतिले चलचित्र निकैनै राम्रो वनेकोमा प्रशसां गरे ।
चलचित्रका दुई मौन पात्र अर्पण र नम्रताले गरेका हरेक क्रियाकलाप सजिलै किसीमले आमदर्शकले बुझ्छन सक्ने किसीमले चलचित्र वन्न पुगेको छ । यसको सबल पक्ष यहीनै मान्न सकिन्छ । यसअघि ब्याच नं. १६, धन्दा, ढुवानी, काठमाडांै (स्पेनिस फिल्म) मा सह–निर्देशकको भूमिका निभाएका भुषालको यो निर्देशकीय क्षमताको प्रशसां दर्शकले गर्नेछन्, फिल्म हेरेपछि मात्रै । चलचित्र हेरेपछि धेरै नेपाली चलचित्र प्रेमीहरुले तारिफयोग्य चलचित्र बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
चलचित्र ः ‘मौन’
निर्देशक ः सुरज भुषाल
निर्माता ः नवीन गौली र सुरज भुषाल
कलाकार ः अर्पण थापा, नम्रता श्रेष्ठ
कथा ःअर्पण थापा
छायांकन ः सञ्जय लामा